Somaliland oo ka hadashay eedayn uu Wasiir Cawad u jeediyay shirkadda DP World - Tilmaan Media
Somaliland oo ka hadashay eedayn uu Wasiir Cawad u jeediyay shirkadda DP World
Wasaaradda arimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland ayaa war kasoo saartay eedayn uu Wasiirka Arrimaha Dibadda dowaladda Federaalka Somaaliya u jeediyay shirkadda laga leeyahay dalka Imaaraatka ee DP World xilli uu waraysi siinayay telefishinka Al-arabi ee laga leeyahay dalka Qadar.
Wasiir Cawed wuxuu DP Word ku eedeeyay inay Soomaaliya ku hayso Faro-gelin iyo Iska hor-keen.
Somaliland ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay hadaladii ka soo yeeray Wasiirka Arimaha Dibada ee Soomaaliya, iyadoo sheegtay dowladda Soomaaliya inay isku dayayso inay carqaladeyso xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya Somaliland iyo dowlada Imaaraadka carabta.
War saxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda arimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa lagu sheegay in arimahan oo kale ay kor uqaadayaan nacaybka iyo cadaawadda ka dhexaysa Soomaaliya iyo Somaaliland.
War saxaafadeedka waxaa lagu yiri “Somaliland waxay si cad ugu dhawaaqaysaa dawladaha walaalaha ah ee Isu-tagga Imaaraatka Carabta iyo dhammaan waddamada xubnaha ka ah Ururka Qarammada Midoobay iyo adduunka oo dhan in madax-bannaanida Somaliland ay tahay go’aan aan la beddeli karin oo ay dadka Somaliland diyaar u yihiin inay sii wadaan halgankooda oo ay gaaraan masiirka xaqa ah, iyadoo aan loo eegin inta ay ku kacayso, dhib kasta oo ay qaadanayso”.
Eedaymaha wasiir Cawad iyo jawaabcelinta Soomaaliland ayaa qayb ka ah, loolanka iyo ismariwaaga kadhex taagan dalalka khaliijka oo saamayn ku yeeshay Soomaaliya, iyada oo lagu eedeeyo dowladda federaalka Soomaaliya in ay gacansaar laleedahay dowaldda Qadar, halka Soomaaliland iyo qayb kamid ah maamul goboleedyada Soomaaliya ay xiriir dhaw laleeyihiin dowladda Imaaraatka Carabta.
Qarax dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay Kismaayo
Wasaaradda Caafimaadka Hirshabeelle oo Agab Caafimaad lagu Wareejiyey.